Buyekeza: "Ummeli Ovikelwe", nguJames Nava | Izincwadi Zamanje
Umenzeli ovikelwe, of UJames nava, iyinoveli ejabulisayo nejabulisayo, lapho singathola khona izinhlobo ezahlukahlukene ezihlangene endabeni yamanje. Le noveli isentshonalanga yesimanje exuba okuthokozisayo, uzungu, ubuhloli, iziqephu ngesitayela esimsulwa senoveli yothando ngisho nenhlansi yamaphupho.
Inoveli ilandisa indaba yomenzeli we-CIA ucashe epulazini laseMontana, eliseduze namaRocky Mountains. Izimpisi nezinganekwane zasendulo zaseNdiya ziyizisetshenziswa ezisetshenziswa nguNava ukumnikeza lelo phuzu elihle elihlanganisa le ndaba. Kuze kube manje, cishe kukukhumbuza enye incwadi enkulu yesiNava engiyibuyekezile ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, Impisi Emnyama. Kepha umlando awuhlangene nakancane nawo. Eqinisweni, ngenkathi ama-Sniper Books engithumela wona, kwadingeka ngilinde ukuyifunda, ngoba uphawu lwayo lwalusele kimi Impisi Emnyama kungivimbele ukuthi ngifunde lesi sihloko esisha ngaphandle kokukhumbula esinye. Kodwa-ke, le ndaba yehluke kakhulu, ngazo zonke izindlela. Ngezansi ngizokutshela okuncane ngale ndaba emnandi, egcwele isenzo, kepha futhi nokuzwela nokunambitheka okuhle.
Umenzeli ovikelwe UDavid Crow utshela indaba yomenzeli we-CIA obalekela epulazini laseMontana, lapho eya khona ukusebenza njenge-cowboy. UDavid, ongomunye wabasebenzeli be-CIA abahamba phambili okwamanje, ucasha ngokubalekela i-fatwa iqembu le-jihadist eliyiphonse kuye.
Ekuqaleni konke kuhamba kahle, kepha lapho isembozo sakhe sonakalisiwe, kusuka ku-CIA basikisela ukuthi iCrow ibe yicebo lokufa lokuqeda amaphekula, ababona hhayi i-ejenti evikelwe kuphela, kodwa nabanye abambalwa. .
Phakathi kwakho konke lokhu, uDavid uthola uthando. Futhi lapho amaphekula ethola, athola indlela ephelele yokwehlisa iCrow.
Kepha uCrow unesikhali esiyimfihlo, ikhono abengalilindele. Ngandlela thile, umlingisi wethu omkhulu uyakwazi ukubona okuzokwenzeka, ngenxa yokuvumelana okukhethekile anakho nezimpisi.
Indaba igcwele izincazelo ezinhle, lapho uNava akhombisa khona konke ukuthanda kwakhe ngaleli zwe laseMontana, kanye nokubabaza kwakhe ngezimpisi. Sesivele sikubonile phakathi Impisi Emnyama, kodwa lokho akukuyeki ukumangala. Iphuzu lokucabanga elihlanganisa nendima edlalwa izimpisi kule ndaba lingokoqobo, futhi liphathwa ngendlela yokuthi ungakholelwa kuyo.
Indaba iqala kancane. INava iyakujabulela ukusikhombisa imvelo, ukufaka ngaphakathi abantu nabalingiswa, amasiko, imicimbi, ubudlelwano bomuntu siqu. Ingxenye yokuqala yencwadi yingxenye okufanele uyijabulele.
Kodwa-ke, njengoba indaba iqhubeka, lapho isenzo siqala, ukulandisa kuyashesha futhi kunamandla amakhulu, kugcwele imizwa, kunezingcezu zodlame olukhulu, kepha kuphathwa ngokunambitheka okuhle kakhulu, lapho uNava akhipha uhlangothi lwakhe lwezempi kakhulu.
Isitayela sikaNava sibonakala ngokusebenzisa ulimi olusebenza kahle, "olweMelika" kakhulu, uma ngingasho njalo. Uthanda ukungena emininingwaneni, akhombise ukusabela nemizwa yabalingiswa. Ngaphezu kwalokho, ulimi lwabo luqondile futhi lucacile, futhi indaba kulula kakhulu ukuyifunda.
Ngikuthande kakhulu ukwelashwa kokuphela, lapho, ngokusebenzisa izingcezu ezimfishane, le ndaba yaqhubeka inikela ngombono we-protagonist, bese kuba ngumphikisi. Lokhu kunikeza ukujula okukhulu endabeni, engena embusweni wengqondo, futhi ivumela ukukhulisa izikhathi zokungezwani okukhulu.
Ngokuqondene nalokho okubhekiswe ekwelashweni kwayo yonke into ephathelene ne-CIA, esetshenziswa njengoba nginjalo ukuyibona kumabhayisikobho nakuchungechunge lwethelevishini, ukufunda izinqubo, incazelo yezobuchwepheshe nezinye izindaba ezihlobene nayo kungihlabe umxhwele.
Mayelana nohlelo, kufanele kuqashelwe ukuthi lokhu, njengazo zonke izincwadi ze-Sniper Books, kuhlelwe kahle, ngezinto zokwakha ezisezingeni eliphakeme. Ikhava, enezinhlobo ezimbili, ithakazelisa ikakhulukazi, ngomklamo omuhle nokubuka kuqala kwento ebikade ithakazelisa kakhulu ekwelapheni umlingiswa: imfihlakalo. Ngoba akukho sikhathi lapho uNava enza incazelo ephelele ngomlingiswa, ohlale ephelezelwa yisigqoko sakhe senkomo kanye nesibhamu (njengoba sibona esembozweni). Ngokuvamile, le ncwadi iphatha kahle kakhulu futhi ukufunda kukhululeke kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Buyekeza: "Ummeli Ovikelwe", nguJames Nava
vice lara kusho
Kuzwakala kuthakazelisa kakhulu. Ngiyaluthanda lolu hlobo lokufunda.
Phendula ku-vicente lara
Ngincoma ukuthi uyifunde. Izokuthanda. Inezenzo eziningi. Zonke izincwadi zikaJames Nava zithakazelisa kakhulu.
Phendula u-Eva Maria Rodriguez